Tuhunkii Hay’adda NISA ee dilka Ikraan Tahliil oo xoogeystay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Tuhunkii Hay’adda NISA ee dilka Ikraan Tahliil oo xoogeystay
Tuhunkii Hay’adda NISA ee dilka Ikraan Tahliil oo xoogeystay
Jawaabta Ururka Al Shabaab oo ahayd mid isha lagu wada hayay ayaa noqotay mid ay isaga fogeynayaan eedda Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ee la xiriirtay in Ikraan Tahliil Faarax, oo xubin ka ahayd hay’adaasi ay u gacan gashay Shabaabka, ka dibna ay dileen.
Shabaabku waxay qoraal ku sheegeen inuu been abuur yahay warka sheegaya inay iyagu qafaasheen Ikraan Tahliil, deetana ay dileen.
Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil ayaa maqnaanshaha gabadheeda ka bari-yeeshay Al Shabaab, iyadoona carabka ku adkeysay in gabadheedu ku maqan tahay Hay’adda NISA.
“Gabadheeda NISA ayaan ku tuhmayaa, tuhunkana waxaa igu dhaliyay meesha gabadha laga qaaday iyo gaariga qaaday. Meesha meel la soo geli karo maaha, waa meel NISA oo keliya ay ka taliso, waa meel amnigeeda sugan yahay. Meel hadda gabadhaas dad kale ugu imaan karaan maaha.” Ayay tiri hooyo Qaali Maxamuud.
Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid ugub ah, marka aad eegto sida ay hay’addu maqnaanshaha gabadhaasi ugu saarisay Al Shabaab.
“Weli ma dhicin qof Nabadsuggid ah oo ay Al Shabaab afduubeen, laakiin boqolaal ay dileen waa jiraan, boqolaal ay toogasho ku xukumeen ama gawaaridooda ay qaraxyo ku xireen waa jiraan. Arrinkan waa arrin ugub ah.” Ayuu yiri Sanbaloolshe.
General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo horey u soo noqday Taliyaha Hay’adda NISA ayaa dhankiisa sheegay in warka NISA uu ku soo aaday, iyadoo guddi ay baarayeen dhacdadaasi.
Ismaaciil Daahir Cismaan, Taliye Kuxigeenkii hore ee Hay’adda Nabad Suggida ayaa baaritaanka kiiskan ku sheegay mid uu mugdi hareeyay.
“26-kii bishii June oo gabadha la waayay iyo 2-dii bishan oo la sheegay geerideeda ayaa tuhun badan waxaa uu ka jiraa in la caddeeyo qofkii gaariga waday oo la yaqaano oo Ikraan ay isku aamintay, in la soo qabto, lana wareysto oo baaritaan dhab ah lagu sameeyo. Kiiska dhanba waxaad mooddaa in wax la qarinayo, maxaa yeelay qofka lama dhihi karo waa la dilay, illaa meydkiisa la arko ama la caddeeyo in hay’adaha amniga ay kor istaaggeen, oo ay caddeeyaan meydka qofka.” Ayuu yiri Ismaaciil Daahir Cismaan.
Xildhibaan Amina Maxamed Cabdi oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa sheegtay inay aaminsan yihiin in Ikraan ay ku jirto gacanta NISA.
“Maalintii la waayay illaa hadda waxaan aaminsanahay in Ikraan ay ku jirto gacanta Hay’adda Nabad Suggida. Haddii ay dhimatay iyadaa laga rabaa meydkeedii, haddii ay nooshahayna iyadaa laga rabaa.” Ayay tiri Xildhibaanadda.
Waxay kaloo tiri “Waxyaabo caddeynaya qofka dhintay, haddii aysan haynin hay’adda, haddee waa dhimatay Facebook lagu soo qoray wax lagu samri karo ama lagu qanci karo maaha.”
Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ku baaqay in baaritaan daahfuran lagu sameeyo dilka Ikraan Tahliil
“Ikraan inay cadaalad hesho waa waajib saaran dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ah, illaa la ogaado dhiigeedii meesha uu ku baxay.” Ayuu yiri Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir.
Ikraan Tahliil Faarax oo la la’aa tan iyo 26-kii bishii June ee sanadkan ayaa warka NISA waxa uu noqonaya kiisii ugu horeeyay ee hay’ad dowladeed kaga hadasho maqnaanshaha gabadhaasi, kuna shaaciso geerideeda, waana xilli tuhun laga muujinayay aamusnaanta muddada dheer ee Dowladda Federaalka.
Warka beeninta ee Shabaabka ka soo yeeray ayaa dabka ku sii shiday tuhunka markii horeba ay dadka badankii ka qabeen in gabadhaasi ku maqan tahay gacanta Taliska NISA.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa saamayn muuqato ku dhex leh Dowladda Federaalka, marka aad eegto galaangalkiisa Madaxda Dowladda Federaalka iyo ku milankiisa siyasadda dalka.
Previous articleXildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle oo lagu dhaawacay Jowhar
Next articleXubno ka tirsan Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo gaaray Jowhar